Like – 12K Share – 2187
2021-06-25 at 8:41 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Gen Lee တွေနဲ့ အခြေအမြစ်မရှိ သတင်းတွေ ရမ်းယုံတဲ့ အပိန်းတစ်ချို့သိအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ သတင်းလား/ဂျင်းလား အစီအစဥ်ကို နှစ်သက်ပြီး အားပေးထောက်ခံနေပါတယ်…
Khin Hnin Thwet says:
2021-06-25 at 9:27 PM
Jam Lunthang says:
2021-06-25 at 9:39 PM
ခုလို ျပည္သူေတြကိုမ်ားမ်ားေျဖ႐ွင္းေပးပါ…ေက်းဇူးပါ ဗ်၊ာ့…
Nǚ Wáng Hòu says:
MWD ကလူတွေရှက်တတ်ရင်သေလို့ရနေပြီ။ သတင်းအမှားတွေကို လွှင့်ရဲတာ နည်းတဲ့ စကေးတော့မဟုတ်ဘူး။ မီဒီယာဂုဏ်သိက္ခာမရှိဘူး။
Ŝpřîñĝ Elan says:
2021-06-25 at 9:57 PM
MDY- pdf သတင်းအမှန်ပြောပြပါလား
2021-06-26 at 12:12 AM
(မိဘပြည်သူများ)လို့မသုံးနှုံးပါနဲ့ ထိပ်ပြောင်ခေတ် ပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရတယ် တိုင်းရင်သားညီအကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ လို့ သုံးနှုံးပါ
2021-06-26 at 1:56 AM
We support NUGwe want justice. We want democracy
2021-06-26 at 7:42 AM
တို႔ေတြကေတာ့ရွင္းရွင္းပဲ, ဘယ္စစ္မိစၧာကို မွ အားမေပးဘူး, ဓမၼဘက္ကပဲ အၿမဲေနတယ္
သူတို႔ဘက္ကဘာသတင္းလႊင့္လႊင့္ မယံုဘူး ပါးစပ္ဟတာနဲ႔လိမ္ေနတာ
ျမန္မာျပည္မွာ ဓမၼကထိကေတြအမ်ားႀကီးပါ အခုဘယ္ေရာက္ကုန္ၾကပီလဲ?
အခုဟာကႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ပါ, ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အေရးပါ , တိုင္းျပည္မေအးခ်မ္းပဲ တရားအားထုတ္လို႔မရပါဘူး, ေနာက္ေၾကာင္းမွမေအးတာ ဘယ္လိုမွသမာဓိမတည္ႏိုင္ဘူး
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား Speak out လုပ္ေပးၾကပါ
ဘယ္သူကအမွားဘယ္သူကအမွန္ဆိုတာ “ဆီနဲ႔ေရ” လို အထင္အရွားႀကီးပါ
အသက္ေပးသြားတဲ့သူေတြ ေပးေနတဲ့သူေတြ ေပးေတာ့မဲ့သူေတြကိုငဲ့ပါ
2021-06-26 at 4:32 PM
2021-06-26 at 5:40 PM
2021-06-26 at 8:52 PM
Myint KO says:
2021-06-27 at 1:52 AM
ဂျင်းသတင်း စကစ ရဲ့ လိမ်ညာများ ေထာက်ပြ ေပးပါ။ Thank.
2021-06-27 at 9:53 AM
2021-06-27 at 9:56 AM
Phwer Phwer Khit says:
2021-06-27 at 3:58 PM
U Nyan Thein says:
2021-06-27 at 7:55 PM
2021-06-27 at 7:58 PM
2021-06-27 at 9:36 PM
Thanks for so much. PVTV.
Winer Winer says:
2021-06-27 at 9:53 PM
2021-06-27 at 11:38 PM
2021-06-28 at 1:35 PM
စကစဟာ ယုတ်မာကောက်ကျစ်ပီးမဟုတ်မမှန်လ်ိမ်ညာလုပ်ကြံဝါဒဖြန့်သတင်းတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကို အထင်မှားအောင်အမြဲလုပ်ဆောင်နေတာပါပဲ။
2021-06-29 at 5:40 PM
သတင်းလာ/ဂျင်လာအစီစဉ်ကို အာပေး ကြည့်ဖြင်ပါတယ်
Hinn Soe says:
ဒဂုံ သားေလး says:
2021-06-30 at 12:08 PM
အမေ့ သမီး ငယ် says:
2021-07-03 at 1:09 PM
2021-07-14 at 9:36 PM
ကျေးဇုပါ ခုလို ရှင်ပြတော့ အားလုံ သိရတာပါ လေးစားလျှက်ပါ
2021-07-19 at 5:51 AM